ऋषी धमलालाई मधुको उल्टै हमला, ‘रोमान्स प्रकृतीले दिएको कुरा हो नसोध्नु धमला जी ! तपाईको छोराछोरी छन् तपाईलाई नै थाहा होला नी’ (भिडियो हेर्नुस्) – Dailny NpNews
ऋषी धमलालाई मधुको उल्टै हमला, ‘रोमान्स प्रकृतीले दिएको कुरा हो नसोध्नु धमला जी ! तपाईको छोराछोरी छन् तपाईलाई नै थाहा होला नी’ (भिडियो हेर्नुस्)
प्रकाशित मिति: सोमबार, जेठ ०३, २०७८ समय: १२:४३:०८
काठमाडौ । मधु क्षेत्री र टिका सानु नेपाली लोकदोहोरीका लागि परिचित नाम हो । उनीहरुले गाएका थुप्रै गीतहरु हिट छन । टिका पुन खासगरी लाइभ दोहोरीका लागि बढि चर्चित छन्, मधु भने सोचे झै जिन्दगी रैनछ भन्ने गीतवाट धेरैले चिन्न सक्छन् । धमलाको हमला कार्यक्रममा पुगेका उनीहरुले निकै रमाइलो गरेका छन् । टिका सानुले धमलाको कार्यक्रममा दोस्रो पटक आइयो भन्दै गीत गाएर कार्यक्रमको सुरुवात गरेकी थिइन् ।
टिका पुनले नयाँ भाकामा गाएका कारण त्यसको जवाफ म दिन सक्दिन भन्दै मधु शाहीले जवाफ दिइनन् । नेपालीहरुको मुख्य पहिचान लोक संस्कृती भएका कारण नै लोकदोहोरी सफल भएको उनीहरुको भनाई छ । मधुले आफ्नो मन निकै कमजोर छ भन्दै सानो कुराले रुने गरेको बताइन् । उनले सानै उमेरमा मागी विवाह गरेकी थिइन् । तर वैवाहिक जिवन सफल नभएको उनको भनाई छ ।
लक्ष्मी पुजाको दिन आफुलाई दिएको या त ना दिएको सम्झेर अहिले पनि उनी भावुक भइन् । अहिले त्यो खोट देखाउँदै या त ना सहन नसकेर सम्बन्ध छुटाएको उनले बताइन् । उनले अहिले आफु खुसी भएको बताइन् । उनले तीन वर्ष अघि सम्म पनि फेरी सम्बन्ध सुधार्न खोजेको भएपनि त्यो सम्भव नभएको बताइन् । उनी अहिले सन्तानका लागि संघर्ष गरेको बताएकी छन् ।
उनीहरुले अहिलेको महामारीको अवस्थालाई इंकित गर्दै पनि दोहोरी गाएका थिए । जनताको वास्तविक दुख नेताले बुझ्न नसकेको भन्दै गुनासो गरे । बुढा नेता बगाएर लैदिए, म नेता भैदिए म देश बनाउँथेँ भन्दै उनीहरुले ब्यंग्य पनि गरे । प्रेम र रोमान्सको बारेमा प्रश्न गरेका ऋषीलाई मधुले दिइन् कडा जवाफ । रोमान्सको बारेमा तपाईलाई पनि थाहा होलानी ऋषी जी तपाइका त २ बच्चा छन् भन्दै ब्यग्यात्मक जवाफ दिइन् ।